Igama legama lesiTaliyane iZiselo kunye neMvelaphi
Ukufumanisa iLifa leMveli yaseNtaliyane
Amagama egama e-Italy alandelela imvelaphi yawo emva kwe-1400s, xa kwakudingeka ukuba ungeze igama lesibini ukuhlukanisa phakathi kwabantu abanegama elifanayo. Amaqhina aseItali ngokuqhelekileyo alula ukuqonda ngenxa yokuba ininzi iphele kwisibhenqo, kwaye amaninzi awo atholakala kwiimpawu zegama ezichazayo. Ukuba ucinga ukuba igama lakho losapho lingavela e-Itali, ukulandelela imbali yalo kungabangela ukuba kuluhlu olubalulekileyo kwilifa lakho laseNtaliyane kunye nedolophana.
Imvelaphi yegama laseItali
Amagama aseNtaliyane aphuhliswe kwimithombo emine engundoqo:
Igama elibizwa ngokuba nguSurnames - La magama okugqibela asekelwe egameni lomzali (umzekelo, uPietro Di Alberto - uPetros unyana ka-Albert)
Amagama eSurnational Occupational - La magama ancike kumsebenzi womntu okanye urhwebo (umzekelo uGivanvan Contadino - uJohn umfama)
Amagama Amagama achazwayo - Ngokusekelwe kumgangatho oyingqayizivele womntu, ezi ziqhamo zivame ukuveliswa ngamagama omnxeba okanye amagama amathofu (umz. UFrancesco Basso - Francis ofutshane)
Iimpawu zegama lomhlaba - La magama ancike kwindawo yokuhlala, ngokuqhelekileyo indawo yokuhlala yangaphambili (umz. Maria Romano - uMariya waseRoma)
Ngelixa ama-Italian amagama okugqibela avela kwimithombo eyahlukeneyo, ngamanye amaxesha isipeliso sesiteti esithile sinokukunceda ugxininise ukukhangela kwindawo ethile yaseItali.
Iimpawu eziqhelekileyo zaseItaliya i-Risso kunye neRussia, umzekelo, zombini zinentsingiselo efanayo, kodwa enye iyaxhaphaka enyakatho yeItali, ngelixa enye ilandelelana ingcambu yayo kwingxenyeni esezantsi yelizwe.
Amagama amagama aseItali aphelile -ahlala ephuma e-Italy esenyakatho, kanti enyakatho yeItali anako ukufunyanwa ekupheleni -i.
Ukulandelela imithombo kunye nokuhluka kwegama lakho le-Italiyina kunokuba yinxalenye ebalulekileyo yophando lwezobuNzabalali, kwaye ivula inkcazo enomdla kwimbali yakho yentsapho kunye nelifa le-Italy.
Igama lomnxeba weItaliyane Iintlanzi kunye neengqungquthela
Amagama amaninzi aseItali ahlukeneyo ngokugqithiseleyo kwigama leengcambu, eyahlukileyo ngokongezwa kweengqungquthela ezahlukahlukeneyo kunye nezihlomelo. Ngokuqhelekileyo eziqhelekileyo ziphela kunye nezikhenkce ezidibanisa ii-consonants ezimbini (umz. -etti, -illo). Ukhetho lwaseTaliyane lwamagama amancinci kunye namagumbi eepilisi yintsimi emva kwezi ezininzi izilwanyana, njengoko kubonwa inani elikhulu lamanqaku aphelileyo ase-Italian aphela--in, -ino , -iyo- , -ello , kunye- , yonke into oko kuthetha "encinci."
Ezinye izixhaso eziqhelekileyo zibandakanya-into enye "enkulu," -accio , ithetha ukuba "enkulu" okanye "imbi," kwaye -cci ithetha "inzala." Iziqendu eziqhelekileyo zamagama amagama aseItali anemvelaphi ethile. Isiqalo esithi " di " (esithetha "so" okanye "esivela") sisoloko siqhotyoshelwe kwigama elinikeziwe ukuba lifake igama lomntu. di di Benedetto, umzekelo, ngumlinganiso waseNtaliyane weBenson (okuthetha ukuba "unyana kaBen") kunye noDiovanni ulingana no-Johnson (unyana kaYohane).
Isiqalo esithi " di ," kunye nesiqalo esifanayo " da " sinokudibaniswa nendawo yokuvela kuyo (isib. Igama le-da Vinci libhekisela kumntu ovela kuVinci). Iziganeko zokuqala zokuthi " la " kunye ne " lo " (okuthethwa ngokuthi "i") edlalwa ngamajelo (umzekelo, uGiovanni la Fabro nguYohane ummthi), kodwa unokufunyanwa kufakwe kumagama omndeni apho kwakubhekisela "kwintsapho" (umz. Intsapho yaseGrco ingaziwa ngokuba yi "Greco.")
Kweminye imimandla yase-Itali, isibongo se sibini singamkelwa ukuze sikwazi ukwahlula phakathi kwamasebe ahlukeneyo kwintsapho enye, ngakumbi xa iintsapho zihlala kwidolophu enye kwizizukulwana. Ezi zikhundla zamagama eziqhelekileyo zihlala zifunyenwe ngaphambili kwegama elithi detto , vulgo , okanye dit .
Iimpawu eziqhelekileyo zesiTaliyane - iZiselo kunye neMvelaphi
I-MENDOZA Igama lomnqophiso kunye neMvelaphi
I-WILLIAMS Igama elithi Nomsuka
MITCHELL Igama lomnqophiso kunye neNtsapho Yembali
UJim Carrey "kwiNtshonalanga engapheliyo yengqondo engapheliyo," ukukhumbula, kunye no-Michel Gondry
Ngaba kukho izinto ezingezona zonyango zeMbrane?
Indlela yokubhala i-Limerick
Inkcazo yokuNyuka kweNdalo
I-Mohs Scale of Hardness
I-Moot and Tute
Amakhadi aphezulu kunabaqalayo
Ubunzima be-Formula kunye neMisa yeMeleki
Ibali leNkxwaleko enkulu kwiIfayile
USophie Kinsella - Uninzi olukhutshwa ngokutsha
Ama-Hyperboles ama-Greatest of All Time
I-Top 10 Ininzi zeNkwenkwezi
Iingxaki zokujoyina i-Fraternity okanye iSorority
9 Iincwadi ezivela kuma-1930 ezihlawulela namhlanje